ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေး တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် | dawnmanhon
ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေး တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ၂၀၁၈ ကို ဇန်န၀ါရီ ၁၉ရက်မှ ၂၈ရက် အထိ ၁၀ရက်ကြာ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်ပြီး မန္တလေးမြို့၌ လည်း ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ် သည်။
ယခုနှစ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် ဂျပန် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ဂျပန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၊ ကာတွန်းကား အပါအ၀င် ၊ စုစုပေါင်း ဂျပန်ဇာတ်ကားပေါင်း ၁၆ ကား ပြသ သွားမည် ဖြစ်ပြီး ၀င်ကြေး အခမဲ့အဖြစ် ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင် မည် ဖြစ်သည်။
ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းမည့် ရုပ်ရှင်တစ်ကား ကတော့ Asian Three-fold Mirror 2016 : Reflection ဆိုသည့် Short Film ၃ကားပေါင်းထားသည့် Omnibus ရုပ်ရှင်ကား ဖြစ်ကာ Japan Foundation Asian Center နှင့် Tokyo International Film Festival တို့ ပူးပေါင်း ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး Philippine ၊ Japan နှင့် Cambodia သုံးနိုင်ငံမှ Shot film ၃ကား ကိုကြည့်ရမည် ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ကား အနေဖြင့် ချစ်စရာကောင်းသည့် ကြောင်နက်လေး Rudolf ၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ် စွန့်စားခန်း ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး Rudolf the Black Cat အမည်ရှိ Animation ကာတွန်းကားလေး ဖြစ်ကာ ကြောင်ချစ်သူများ သဘောကျမည့် ဇာတ်ကား နှင့် Memoirs ofaMurderer ဟု အမည်ပေးထားသည့် ဇာတ်ကားကတော့ အက်ရှင် နှင့် သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Relife ဒရမ်မာ ဇာတ်ကား ၊ မိသားစု တန်ဖိုးကို ပုံဖော် ရိုက်ကူးထားသည့် Tora-san of Goto ဇာတ်ကား ၊ ကွေကွင်းခြင်း နှင့် ဆုံစည်းခြင်းအကြောင်းကို စိတ်ထိခိုက်ဖွယ် ၊ စိတ်နွေးထွေးဖွယ် ဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးထားသည့် THE LONG EXCUSE ၊ ဟာသဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည့် Survival Family ၊ အက်ရှင် သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်ကား ဖြစ်သည့် MUMON ဇာတ်ကား ၊ ကျွန်းရွာကလေး၏ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်သည့် ဘဝကို နောက်ခံ ပြုထားသည့် The Mohican Comes Home ဇာတ်ကား ၊ ဖူကူအီ ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်း ကျောင်း၏ Cheerleading Team (အားကစားပွဲတွေမှာ မိမိ အသင်းကို အကအခုန်များဖြင့် အားပေးသည့် အဖွဲ့) အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားသည့် Let’s Go, JETS! From Small Town Girls to U.S. Champions? ဇာတ်ကား ၊ သမိုင်းနောက်ခံ ဇာတ်ကားဖြစ်သည့် In This Corner of The World ဇာတ်ကား ၊ HONNOUJI HOTEL ဇာတ်ကား ၊ Her Love Boils Bathwater ဇာတ်ကား ၊ Daytime Shooting Star ဇာတ်ကား ၊ CHIHAYAFURU Part 1 ဇာတ်ကား ၊ CHIHAYAFURU Part2ဇာတ်ကား တို့ပဲ ဖြစ်သည်။
ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့ မှ (၂၈) ရက်နေ့ အထိ ရန်ကုန် နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် JCGV Juntion City ရုပ်ရှင်ရုံ တို့တွင် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး မန္တလေးမှာတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက် မှ ၄ ရက် အထိ ဝင်းလိုက် ရုပ်ရှင်ရုံတွင် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။
dawnmanhon: ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေး တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်